दोक्लम प्रकरणः भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिको नयाँ उदाहरण - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
दोक्लम प्रकरणः भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिको नयाँ उदाहरण
आफूलाई दक्षिण एसियाको सुपरपावर भन्ने दम्भ पाल्दै आएको भारत न छिमेकीहरुलाई रिझाउन सकिरहेको छ, न जित्नै सकिरहेको छ । तर यही बेला भारत निहुँ खोज्न भने चम्किरहेको छ । आफ्नो आंगमा भैंसी हिडेको नदेख्ने, अर्काको आंगमा जुम्रा देख्ने दृष्टिदोषकै परिणति हो ।
चीन र भारत विश्वका सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक त हुन् नै हुन, त्यसबाहेक विकास, समृद्धि र सम्पन्नताको होडमा पनि उत्तिकै प्रतिष्पर्धी नेपाली छिमेकी हुन् । संसार साक्षी छ, साम्यवादी देश चीन हरेक हिसाबले विश्वको मुख्य शक्ति राष्ट्र बन्दै छ । उसले सन् ९० को दशक ताका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकल साम्राज्य चलाउँदै आएको अमेरिकी दम्भलाई आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक र विकासका सबै उपायद्धारा दिन दिनै जित्दै, किच्दै र पछि पार्दै गईरहेको छ । संसारलाई पल पल जितिरहेको तर कसैलाई बिझाउने, दुखाउने नगरी विश्व शक्ति नायक बन्दै गईरहेको नेपालको असल उत्तरी छिमेक हो चीन भन्नेमा कसैको बिमति हुन सक्दैन ।
यता आफूलाई दक्षिण एसियाको सुपरपावर भन्ने दम्भ पाल्दै आएको भारत न छिमेकीहरुलाई रिझाउन सकिरहेको छ, न जित्नै सकिरहेको छ । तर यही बेला भारत निहुँ खोज्न भने चम्किरहेको छ । अहिले भुटान र चीनको सीमा नाका दोक्लममा भारतले चिनियाँ सेना सामु गरिरहेको हुक्काँ पनि भारतको आफ्नो आंगमा भैंसी हिडेको नदेख्ने, अर्काको आंगमा जुम्रा देख्ने दृष्टिदोषकै परिणति हो । नेपालको तीन तिरको भुगोलको छिमेकी भारत त्यस्तो छिमेक हो, जो सधै सँधियार देशसँग दुश्मनी गरेर श्रेष्ठताको दम्भ देखाएर बिरलै थाक्छ । पाकिस्तानसँगको उसको जन्मजात दुश्मनी, भुटानमाथिको उसको पुस्तौनी थिचोमिचो, वंगालदेशप्रतिको वक्रदृष्टि वा नेपालमाथिको निरन्तर हस्तक्षेप वा चीनसँगको वेमौसमी निहुँ खोजाहा प्रवृत्ति भारतीय हैकमका ताजा उदाहरण नै हुन् ।
चीन र भारतको सशस्त्र द्वन्द्व हुने स्थान दोक्लम नेपालको पूर्वी र पश्चिमी दुबैतर्फ पर्दछन् । नेपाल चेपुवामा पर्दैन भने नी पर्ने अवस्था छ । नेपाल चीनसित भौगालिक सीमाना जोडिएका १४ वटा मुलुकमध्येको एक हो । चीनको नेपालसित सीमा विवाद छैन । नेपाल चीन संवन्धको असल पक्ष यही हो । र, अन्य ११ वटा देशसितका सिमाना सम्बन्धी पनि उदाउदो विश्व शक्ति देश चीनले सुल्झाइसकेको छ । चीनको असल छिमेक नीतिको गतिलो उदाहरण यही हो । नसुल्झेको भनेको खालि भारत र भुटानसितको मात्र हो । त्यो पनि चीनको कारण नभई, भारतका कारण भैरहेको रेडिमेड बिबादको जड हो ।
भारतीय पराजयको इतिहासः
१३८३ सैनिककोे इहलिला समाप्ती, १६९६ सैनिक वेपत्ता, वा ३९६८ सेना चिनियाँ जनमुक्ती सेनाका युद्धबन्दी । सन् १९६२ को भारत चीन वीचको यद्धमा नेपालको तीनतिरको छिमेकी भारतले पाएको क्षतीको श्यामश्वेत तस्वीर त्यही हो ।
हो, सन् ६२ को युध्दमा भारतका मारिएका, १३८३, बेपत्ता १६९६ र चिनियाँ बन्दक बनाइएका ३९६८ भारतीय सेना मध्ये घाईते २६ सैनिक त चिनियाँ भुमिमा नै देहत्याग गर्न विवश भए । बाँकी बन्दी सन् १९६३ मे महिनामा भारत फिर्ता भए जसमा ब्रिगेडिएर जोन पी डाल्भी समेत थिए । भारतले तीन वर्षपछि मानवीय नोक्सानीको यो विवरण सार्वजनिक गरयो । युद्ध जितेको चिनले आफ्ना सैन्य तथा सामरिक क्षतीको विवरण सार्वजनिक नगरे पनि उसले कम क्षतिमा भारतविरुद्ध युद्ध जितेको भारतीय सैन्य तथा सामरिक क्षतीको गणितले नै प्रमाणित गरयो ।
रमाईले त के भने करीब ४ हजार भारतीय सेना चिनियाँ युद्धबन्दी हुँदा भारतीय फौजले चीनको एकजना सिपाही समेत युध्दबन्दी बनाउन सकेन । भारतले निहुँ खोज्यो, तर यद्धमा आफै धुलो चाट्यो, त्यो पनि अकल्पनीय मानवीय तथा सैन्य क्षतिका साथ । हो, नेपाली क्यालेन्डर अनुसार वि.सं. २०१९ साल कार्तिक महिनामा नेपालका दुई ठूला छिमेकी देश सिमानाकै कारण सैन्य युद्धमा होमिए । त्यतिबेला नेपालमा राजतन्त्र थियो र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पंचायती एकदलीय व्यवस्था भर्खर वामे सर्दै थियो । नेपालले पंचायति संविधान भर्खरै पाएर संवैधानिक अभ्यास गर्दै गर्दा युद्धमा होमिएका दुई छिमेकीको त्यो युध्द एक महिना चल्यो र त्यसमा भारतले पराजय बेहोर्नु परयो । युद्धका क्रममा जनधनको अकल्पनीय क्षति र नोक्सानी त भयो नै त्यसको साथसाथै भारतले भूभाग पनि गुमाउनु पर्यो । निहुँ खोजुवा पनि भारत, हार्ने पनि भारत र भुमि गुमाउने पनि भारत । त्यही थियो १९ सालको युद्धको परिणाम ।
२०१९ कार्तिक ४ गते अर्थात सन् १९६२, २० अक्टोबर का दिन चीनबाट पहिलो आक्रमण हुँदा भारत राम्रो तयारीको अवस्थामा नै थिएन । चिनियाँहरुले अति भएपछि पहिलो आक्रमण गरेर भारतलाई बिना कारण छिमेकसंग टिमेका लिनु हुन्न भन्ने महंगो युद्ध सबक सिकाएका थिए । उतिबेलाको युद्धमा चीनले फेरि ठोक्यो, ठोकिरहयो भारतलाई । रक्षात्मक अवस्थामा भारतीय सेना र आक्रामक रुपमा चिनियाँ सेना भीडेका थिए । चिनियाँ आक्रमको दमदार युद्धले भारततर्फ निरन्तर थप क्षति गरायो । आफ्नै बलबुताले चिनियाँ जनसेना विरुद्ध युद्ध जित्नु भारतका लागि फलामका च्यूरा चपाउनु सरह थियो । त्यसैले भारत अमेरिकासित सैनिक सहायता माग्ने रणनीतिमा अग्रसर भयो ।
जसै भारत अमेरिकासंग सैन्य सहायताको गुहार मागेर चिनलाई थप प्रत्याक्रमण गर्ने प्रयाशमा अघि बढ्दै थियो त्यसै बखत चीनले एकतर्फी युध्दविराम घोषणा गरिदियो । माओत्सेतुंगकोे जनमुक्ति सेनाको अगाडि जवाहरलाल नेहरुको भारतको सैन्यबल टिक्न सकेनन् । भारत हारयो । उसले अमेरिकालाई निम्तो दिने प्रयाश पनि सफल पानै सकेन । चिनले एकतर्फी युद्ध बिराम गरेर विदेशीलाई खेल्ने मौकामा नै वुद्धिमतापूर्वक पूर्णबिराम लगाईदियो । सन् ६२ को युद्धबारे भारत सरकारले धेरै कुरा आधिकारिक रूपबाट सार्वजनिक गरेको छैन किनभने त्यो युध्द नेहरूको ‘अग्रगामी नीति’ को प्रतिकार गर्ने क्रममा चीनबाट सुरु हुन पुगेको थियो । तर भारतको काँग्रेस पार्टी र सरकारहरूले नेहरूको कमजोरी प्रकट हुने विषय बाहिर ल्याउन चाहेनन् । तर सन् २०१४ मा अष्ट्रेलियाका पत्रकार नेभाइल म्याक्सवेलले सन् ६२ को युध्दको उद्घोष चीनले होइन, नेहरूले गराएका हुन् भनेर लेखिदिएर भारतीय चेहरा उदाँग पारिदिएका थिए । उनले उस बेलाको द्वन्द्वबारे सरकारले गराएको गोप्य छानविनमा आधारित ‘हेण्डर्सन ब्रूक्स रिपोर्ट’ भनिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतको क्षतीको रहस्य यति बलियो रुपमा सार्वजनिक गरिदिए की भारतीय रक्षा मन्त्रालयले म्याक्सवेलले गरेको यो रहस्योद्घाटनको खण्डन गर्न सम्म पनि सकेन कथित संवेदनशील र अति गोप्य मामिलाबारे केही भन्न नमिल्ने वक्तव्य जारी गरेर चुपचाप बस्न बाहेक ।
सन् ६२ को युद्धमा भारतको ‘लज्जाजनक’ हारको जिम्मेवार नेहरू हुन् भन्ने निष्कर्ष भारतकै लेखक र विश्लेषकहरूले पनि निकालेका छन् । अंग्रेजले छोडेको विवादग्रस्त नक्साको आडमा चीन अधिनस्थ भैसकेको तिब्बतको सिमाना उत्तरतिर घँचेट्ने बिस्तारवादी मिचाहा भारतीय चाहनाको परिणाम थियो त्यो युद्ध । त्यो भारतीय हैकमवादको एक रुप थियो । तत्कालिन भारतीय शासक नेहरूले आन्तरिक असहमतिका कतिपय स्वरको बेवास्ता गर्दै जर्नेल बी एम् कौल र गुप्तचर प्रमुख बी एन् मल्लिकमाथि आफूलाई बढी निर्भर तुल्याएर शासकीय भुलमा उत्तरी छिमेकसंग पौठेजोरी खेल्न गरेको मुर्खता पनि थियो त्यो युद्ध । भारतीय लेखक ए जी नूरानीकै शव्दमा अहिले डोक्लामको सम्बन्धमा लिइएको नीतिले सन् ६२ को भन्दा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यस बेलाका चिनीयाँ राजदूत पान सुलीले भारतसित मैत्रीभाव कायम राख्न कामलाग्ने सूत्रहरू दिएका हुन् तर भारतीय पक्षले निरन्तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै गयो । चीनले अहिले त भारतलाई फेरि पाठ पढाउने बाध्यता नआओस् भन्ने सन्देश दिई नै सकेको छ ।
छिमेकको टिमेक, नेपालको भूमिका के ?
आधुनिक नेपालका एकीकरणककर्ता राजा पृथ्वी नारायण शाहकै शव्दमा नेपाल भारत चीन वीचको दुई ढुंगाको तरुल हो । तर भारत चीन अर्थात दुई ढुंगा आपसमा लडदा पनि तरुल रुपी नेपाल जोगियो । पृथ्वी नारायण शाहकै सन्तती राजा महेन्द्रले भारत चीन युद्धमा नेपाललाई तटस्थ राख्ने उदाहरणीय भुमिका उतिबेला देखाएको इतिहास साक्षी छ । चीनद्वारा भारतमाथि पहिलो हमला भएको पाँचौं दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा तत्कालिन नेपाली राजा स्व. महेन्द्रले दिएको सन्देशमा छिमेकमा शुरु भएको युध्दबारे भनिएको थियो, ‘नेपालले आफ्नो सबभन्दा नजिकको महान् छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीचको अत्यन्त नरमाइलो र डरलाग्दो संघर्ष यथाशीघ्र दुबैलाई मर्का नपर्ने किसिमसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान होस् पनि नभनिरहन सक्तैन’।
त्यसको एकवर्षपछिको त्यसै अवसरमा स्व. राजा महेन्द्रले तटस्थ नेपाल नीतिलाई फेरि दा्होरयाएका थिए, ‘…भारत र चीनका बीच उत्पन्न भएको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल आफूलाई असजिलो परेको अनुभव गर्दछ’। त्यस बखतसम्म चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य थिएन, र राजा महेन्द्र सदस्यता दिलाउने पक्षमा थिए । भारतलाई नचिढयाईकनै चीनियाँ पक्षमा नेपालको साथको नमुना पनि थियो स्व. राजा महेन्द्रको सो नीति । दुई छिमेकीको युद्धले नेपाललाई अप्ठेरो पारे पनि नेपाल आफ्नो सर्वोपरि हितका लागि विवादमा नफसेरै जोगियो । दुई छिमेक वीच विवाद नचर्काउन पुग्ने सानो योगदान समेत तटस्थताको नीतिको अवलम्बनबाट गर्ने राजा महेन्द्रको नीति सही साबित पनि भएको थियो ।
अहिले नेपाल किन मौन ?
भनिन्छ, मौन कुटनीति पनि साना मुलुकका लागि सही हो । दोक्लममा भारतले अहिले चीनले बनाईरहेको सडकको निहुँमा बेकारमा तनाव झिकेको हो । यो तनावको भूगोल भारतको पनि होईन । भुटानको भुगोलमा भारतीय सेनाले चीनसित निहुँ खोज्नुको मतलव भारतको ज्यादती हो । अर्को देशको भुमिमा भारतको सैन्य उपस्थिति आफैमा भारतीय गल्तीको ज्यूँदो प्रमाण हो । भुमि भूटानको । सीमा भुटान र चीनको । अनि भुटान र चीनको सीमा भूगोलमा भारतीय सेनाको जर्वरजस्त तैनाथी र तनाव । यही नै कारण हो की नेपाल भारतको मिचाहा ज्यादती र प्रवृत्ति विरुद्ध बोल्नु नै पर्दछ । सार्वभौम देश नेपालले यो भारतीय अतिक्रमणको दर्शक भएर होईन, सत्यवादी भएर मुख खोल्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालले अब भारतको ज्यादती विरुद्ध बोल्ने साहस गर्नुपर्छ । सन्तुलित रुपमा उसले भारतीय हैकमको विरोध कुटनीतिक, राजनीतिक रुपमा गर्नु नै नेपालको हितमा छ । भारतले भुटानको सुरक्षा जिम्मा लिने उसको हैकमवादी चरित्र दोक्लममा चीनसित लडने तहमा ओर्लिुन पर्ने कुनै कारण नै छैन ।
काँग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा विदेशमन्त्री भएको यो बेलामा दोक्लममा देखिएको भारतीय हैकम विरुद्ध उचित प्रतिकार नगर्नु भनेको सरकारी लाचारी मात्रै हुने छैन, भारतीय हैकम भोलिका दिनमा नेपालमा थप बिस्तार हुन दिने प्रपन्च पनि हुनेछ । किन भने भारतसँग नेपालको तीनतिर सीमा छ र सबैतिर कुनै न कुनै रुपमा तनाव छ । इतिहास साक्षी छ की, कालापानी नेपालको हो । तर कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ छ । तै पनि नेपाल चुप छ । लिपुलेक नेपालको हो । तर त्यहाँ पनि भारतीय प्रभुत्व कायम छ । र, नेपाल चुप छ । सप्तरीको तिलाठीमा गतवर्ष भएको तनाव ताजै छ । कन्चनपुरमा अस्ती भर्खरै एक होनाहार युवा………..ले सीमा तनावकै कारण भारतीय सैनिकको गोली खाएर शाहदत प्राप्त गरेको रगत आलै छ ।
एकातिर नेपाल आफै भारतीय सीमा अतिक्रमण्बाट निरन्तर आक्रान्त छ । अर्कोतिर उ छिमेकीको समस्यामा पनि बोल्दैन भने नेपाल सरकार भारतीय मतियार बनेको सन्देश जान्छ । तर यथार्थ त्यस्तो होईन नै । नेपाल खासमै भारत विरोधी जनमनहरुको, स्वाभिमानी भारत विरोधी जनहरुको पवित्र सार्वभौम देश हो ।जनताको पुरै हिस्सा भारत विरोधी छ , केही नेता र दलका भारतमुखी तप्ककाका अलावा । त्यसैले नेपाल सरकारले भारतीय हैकम विरुद्ध बोल्नुपर्छ दोक्लम प्रकरणमा । किन भने छिमेकको निदहराम गर्ने भारतले नेपालको पनि निदहराम गरिरहेकै छ । सर्प सर्प नै हो, उसको विषले भुटान चीनलाई मात्रै होईन नेपाललाई पनि सताएको तथ्य नेपाल सरकारले बिर्सन हुदैन । तर खोई किन चुप छन प्रधानमन्त्री देउवा र विदेश मन्त्री महरा ?